Saafi Films - News: Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM oo Hawlgallo Ballaaran ka Sameeyey Muqdisho
Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM oo Hawlgallo Ballaaran ka Sameeyey Muqdisho
Magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya muddooyinkaan waxaa ka socda hawlgallo kala duwan oo ay ka wadaan qaybaha kala duwan ee Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa ka socda Midowga Africa ee AMISOM.
Ciidamada Booliska Dowladda Soomaaliya oo gacan ka helaaya Booliska AMISOM ayaa xalay qeybo badan oo magaalada Muqdisho ka tirsan ka sameeyay howlgalladii ugu ballaanaa, iyagoo howlgaladaasi kusoo qab qabtay dad badan oo ay ku jiraan ragg ka tirsan Al shabaab.
Ciidamada Booliska ayaa xalay saqdii dhexe gudaha u galay xaafado tuhun badan laga qabay halkaasi oo ay ku dhuumaaleysanayeen rag amaanka Muqdidisho lidi ku ah, waxaana xaafadaha xalay la galay ay ku kala yaallaan degmooyinka, Xamar-Jajaba, Waabari, Wadajir, Yaaqshiid iyo degmooyin kale.
Ilaa hadda sida ay sheegayaan wararka kasoo baxaaya howlgaladii xalay inka badan 200-qof oo ay ku jiraan rag katirsan Al shabaab ayaa lagu soo qab qabtay .
Ciidamada Booliska Soomaaliya, AMIOSM iyo hay�adaha amaanka ee Dowladda ayaa maalmihii lasoo dhaafay wadday howlgallo ay ku xaqiijinayaan amaanka caasimada Muqdisho
nasro on October 05 2012 ·
4,547,562 unique visits